Rubber Roller, Rubber Mixer, Rubber Filter - Amandla
I-Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd.iyinhlangano ekhiqiza kahle imishini yesimanjemanje yenjoloba ehlanganisa ucwaningo lwesayensi nokukhiqiza.Funda kabanzi
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi: Umshini We-Rubber Roller Stripping, i-CNC Grinding / Grooving Machine, i-CNC Cylindrical Grinder, i-Rubber Roller Covering Machine, njll. Funda kabanzi
Uma unesifiso kunoma yiziphi izinto zethu ezilandelayo ubheka uhlu lwethu lomkhiqizo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuthola imibuzo. Uzokwazi ukusithumela ama-imeyili ...Funda kabanzi
I-Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd
Kule minyaka engama-20 edlule, inkampani ayisebenzisanga nje kuphela amandla ayo ku-R & D nokukhiqizwa kwemishini, kodwa futhi icwaninga njalo ngobuchwepheshe bokukhiqiza obuphelele.
Injoloba yamandla Roller
Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka phakathi: Umshini We-Rubber Roller Stripping, i-CNC Grinding / Grooving Machine, i-CNC Cylindrical Grinder, i-Rubber Roller Covering Machine, i-Rubber Roller Polishing Machine, Ithuluzi Lokulinganisa Lobungcweti, Njll.
I-Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co., Ltd. igxile ekwakhiweni kwemishini yenjoloba enezikali ezinamandla zokukhiqiza. Ngamandla amakhulu wezobuchwepheshe kanye nokuhlangenwe nakho okucebile okuqoqiwe, zonke izinhlobo zemishini ziye zaqashelwa ngazwi linye ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe. Imikhiqizo isithengiselwe amazwe angaphezu kwama-20 emhlabeni jikelele kubandakanya iMelika, iJalimane, iSouth Korea, iNingizimu Afrika kanye neBrazil. Ngokuya ngekhwalithi, ubuchwepheshe, kanye nesipiliyoni, uJinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co, Ltd. ube ngumholi embonini yezinsimbi zenjoloba futhi usezingeni lomhlaba jikelele.
Imikhiqizo eyenziwe yinkampani ifaka phakathi: umshini wokuzenzakalela wenjoloba kanye nomshini wokumboza, umshini okhethekile wokugaya iraba, imisebenzi eminingi ye-CNC cylindrical grinder, umtshina okhethekile we-laser werabha yenjoloba nekhanda elikhethekile lokugaya iroller yerabha. Le mikhiqizo engenhla izuze imiklomelo eyisishiyagalombili yomkhiqizo kazwelonke noma wesifundazwe kanye nemiklomelo emithathu yocwaningo lwesayensi eSifundazweni saseShandong. Ngo-2002, umkhiqizo wadlula ukuhlolwa kweCCIB Quality Center kanye ne-ISO9001: 2000 isitifiketi sohlelo lwekhwalithi kazwelonke. Ngo-2013, ithole ukwesekwa okukhethekile kocwaningo lwesayensi nezobuchwepheshe nentuthuko eShizhong District, eJinan, futhi yaqala ukusungula iraba roller imishini ubuchwepheshe ubuchwepheshe operation isikhungo. Zisebenzisa imishini yethu, izinkampani zingathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komkhiqizo, zithuthukise ikhwalithi yomkhiqizo, zonge izindleko, futhi zilethe izinzuzo ezinkulu kwezomnotho kubasebenzisi.
Le nkampani inamathela kumgomo "wamakhasimende kuqala", ithuthukise futhi yakhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yokukhiqiza i-roller roller, enelise futhi yazuza indumiso evela kubasebenzisi. Inkampani izokwenzela izinzuzo ezinkulu kwezomnotho ngamayunithi wabasebenzisi anesithombe esihle sobuchwepheshe, insizakalo esezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe obuhle kakhulu, kanye namanani entengo afanele.